Novelist -ka Tansaaniya ee layaabka leh ayaa Abaalmarinta Nobel ee Suugaanta lagu Abaalmariyay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Novelist -ka Tansaaniya ee layaabka leh ayaa Abaalmarinta Nobel ee Suugaanta lagu Abaalmariyay
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Guuleystaha Nobel Prize iyo qoraa reer Tanzania Abdulrasak Gurnah
Abdulrasak Gurnah oo ah qoraa reer Tansaaniya ayaa daabacay 10 sheeko -wadaag iyo sheekooyin gaagaaban oo tiro badan, qaar badanna waxay la socdaan nolosha qaxootiga iyagoo la tacaalaya khasaaraha iyo jugta uu sababay gumeystihii reer Yurub ee qaaradda Afrika, wax uu qoraagu naftiisa ku noolaa. Waxaa loo magacaabay abaalmarinta Nobel ee suugaanta 2021.
Intii uu masaafurinta ku jiray, Abdulrasaaq Gurnah wuxuu bilaabay in uu wax u qoro si uu ula qabsado dhaawacyadii ka soo gaaray in uu ka tago dalkiisa hooyo.
Wuxuu noqday cod muhiim u ah waaya -aragnimada iyo taariikhda gumaysigii reer Yurub ee qaaradda Afrika ka dib.
Waa ninkii ugu horreeyey ee Afrikaan ah ee loo magacaabo abaalmarinta Nobel Prize ee qaybta suugaanta muddo ku dhow 20 sano.
Gurnah wuxuu ku dhashay 1948 Zanzibar. Markii laga xoreeyay Boqortooyadii Ingiriiska 1963-kii, Zanzibar waxay soo martay kacdoon rabshado wata oo horseeday in la dhibaateeyo dadka laga tirada badan yahay ee Carabta. Isaga oo ka tirsan qowmiyaddaas la beegsaday, Gurnah waxaa lagu qasbay inuu magangalyo ka helo England markii uu jiray 18 sano.
Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Jarmalka, Heiko Maas, ayaa bayaan soo saaray Oktoobar 7, 2021, oo ku saabsan go'aanka Guddiga Nobel ee abaalmarinta Nobel Prize for Literature ee Abdulrazak Gurnah. Bayaanka ayaa u qornaa sidan.
“Qoraaga Tanzaaniya Abdulrazak Gurnah, ma aha oo kaliya in la sharfo cod muhiim ah oo ka dambeeya gumaysigii, laakiin sidoo kale waa qofkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee ku guuleysta qaybtan muddo ku dhow labaatan sano. Sheekooyinkiisa iyo sheekooyinkiisa gaagaaban, Gurnah wuxuu kaga hadlayaa taariikhda gumaysiga iyo saamaynta uu ku leeyahay Afrika, kuwaas oo ilaa maanta naftooda dareensiinaya - oo ay ku jirto doorkii ay qaateen taliyayaashii gumaysiga Jarmalka. Wuxuu si cad uga hadlaa cuqdadda iyo cunsuriyadda wuxuuna u soo jiitaa dareenkayaga ku aaddan safar dhif ah oo ikhtiyaari ah laakiin aan dhammaad lahayn oo ah kuwa u socdaalaya adduun kale.
"Waxaan jeclaan lahaa inaan u soo jeediyo Abdulrazak Gurnah hambalyada ugu weyn ee ku aaddan ku guuleysiga Abaalmarinta Nobel ee Suugaanta-abaalmarintiisu waxay muujineysaa sida lagama maarmaanka u tahay wada-hadal firfircoon oo ballaaran oo ku saabsan dhaxalka gumeysiga."
The Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) aqoonsaday guusha Abdulrasak Gurnah, iyo Madaxweynaha ATB Alain St.Ange ayaa lahaa sidan:
“Annaga oo ah Guddiga Dalxiiska Afrika waxaan u hambalyeynaynaa qoraaga reer Tanzaaniya Abdulrazak Gurnah oo la siiyay abaalmarinta Nobel ee suugaanta 2021 -ka. Wuxuu ku faanay Afrika. Guusha uu gaaray wuxuu muujinayaa in Afrika ay iftiimin karto iyo in dunidu ay u baahan tahay oo kaliya in la furo baalasha qof walba oo Afrikaan ah si uu noo oggolaado inaan duulno. ”
Madaxweynaha Golaha Dalxiiska ee Afrika wuxuu ku riixayay Afrika inay dib u qorto sheekadeeda oo aysan marnaba seegin fursad ay dib ugu dhawaaqdo baaqan, isagoo yiri USPs ee ugu muhiimsan Afrika waxaa si fiican ugu dhawaaqi kara Afrikaanka.
ATB waxay sii wadaa inay ku cadaadiso Afrika inay noqoto mid midaysan maadaama ay isu diyaarinayso dib-u-furitaanka warshadeeda dalxiiska.
Gurnah hadda waa borofisar ka soo baxay barashada Ingiriisiga iyo daraasadaha dambe ee Jaamacadda Kent.